Taombaovao, Eid, Famadihan-drazana
2013-08-12 @ 17:52 in Ankapobeny
Miarahaba ny mpamaky rehetra indray amin'ity anio ity. Mandingana herinandro vaovao isika, niova ihany koa ny volon'andro eto an-drenivohitra amin'izao lohataona izao. Raha nangatsiaka fatratra ny andro nandritra ny herinandro dia niova kosa izany nanomboka ny zoma farany teo. Nifanontona indrindra tamin'ny fankalazan'ny ao amin'ny finoana Islamo ny "Eid El-Fitr" izany fiovam-bolonandro izany. Tsara andro ry zareo, araka ny fomba fiteny fa teo vao nanomboka nihanafana ny andro taty anivontany. Izay tokoa angamba vao tena lohataona ny eto amin'ny tan�na.
Etsy ankilan'izany, nankalaza ny taombaovaony ihany koa ny vondron'olona sasantsasany eto Madagasikara, vondron'olona mpandala ny nentin-drazana manana fotoam-pankalazana mitovy amin'ny an'ny Silamo isaky ny Eid saingy tsy afa-misitraka kosa ny fahafahana tsy miasa nefa mandray karama. Eny Anosimanjaka no foiben'ireto mpandala ny nentin-drazana malagasy ireto. Tsindraindray ihany aho no mba mahara-baovao fa ny hitako dia tsy mba misandoka ny fetiny sy ny taombaovaony ho taombaovao malagasy ry zareo eny amin'ny haino aman-jery rehetra eny. Tsy tahaka izay nitranga tamin'ny volana marsa izay milaza ny taombaovaony ho taombaovao malagasy fa nahay nanetry tena na dia maro dia maro aza ny itovizana amin'ity taombaovao ity sy ny tamin'ny volana marsa. Raha mijery ny tantara dia ity taombaovaon'Anosimanjaka ity no nahazatra sy hita tamin'ny fanisan'andro (navoakan'ny teny Imarivolanitra aza) ary be mpanaraka kokoa fa somary vao haingana kosa vao miezaka ny mampandresy lahatra ny azy ny Trano Koltoraly malagasy.
Ankoatra izay, nifanindry tamin'ireo fotoana roa efa voatonona ireo ihany koa ny fanaovan'ny maro ny famadihan-drazana, indrindra fa ny eto anivontany hatrany, ka azo heverina fa tamin'iny faran'ny herinandro iny sy izao fanombohan'ny herinandro izao no faratampony tamin'ny fanaovan'ny olona mpanao izany raha ny amin'ity taona ity. Na dia samy manana ny androny aza ny mpanao famadihan-drazana dia efa azo vinaniana izay fahamaroan'ny fanaovana azy izay satria tsy maintsy nisy ny fijerena andro tany amin'ny mpanandro (na mpanao hatsarana, hoy ny anganon'ny Ntaolo nangonin'i Lars Dahl izay) amin'ny hanatontosana ny fomba ka eo no anisan'ny andro tsara indrindra. Fotoana hakana ny tso-dranon'ny Razana, toa ahatsiarovana indray ny fandroana faha-mpanjaka sy ny fitsofan-drano ataon'ny mpanjaka ho fanombohana ny taona indray.
Ny itovizan'ireo fety telo nolazaiko teo ireo dia fotoam-piravoravoan'ny rehetra ao amin'ny fiaraha-monina ilay izy. Izay any amin'ny faritra hafa dia miezaka mody any an-tanindrazany (ambanivohitrany) ary mandeha avokoa ny fianakaviana rehetra tsy misy anavahana. Fety fanaovana sakafo mafilotra ihany koa eo ary anisan'ny nahatonga ny hanim-pitoloha na dia vary be menaka aza no tena ahafantarana ny sakafon'ny famadihan-drazana. Maro ihany koa ny maka fanapaha-kevitra goavana amin'io fotoana io. Indraindray aza mampieritreritra ahy manokana fandrao avy amin'ny fety iray no nipoiran'ny roa farany. Mariho fa Habib no anaran'ny nampiditra ny fandroana, ary azo lazaina fa nampifanandrifiany tamin'ny Eid ilay fandroana (tetika hanasilamoana tsikelikely ny teto anivontany saingy tsy tontosa hatramin'ny farany noho ny fanapaha-kevi-dRadama rainy hirona ho amin'ny fampiasana ny soratra latinina). Raha vao mandre izany anarana Habib izany anefa dia anarana Arabo avy hatrany no ao an-tsaina. Mba erirteritra tsy tana ny ahy!
Farany, mba nanao fiarahabana ireo olom-pantatro aho tamin'ny sehatra nahafahako nanao izany fa Miozolomana iray ihany no faly sy nihoraka tamin'ny arahaba nataoko fa ny hafa nihanahana sy tsy mahazo izay lazaiko angamba (ka afa-nihevitra ahy ho toy ny adala!).